ဒီကောင်တွေက မေးနေတာမဟုတ်ဘူး အမှန်တရားကို သိချင်တာ မဟုတ်ဘူး စော်ကားနေတာ – များသွားပြီ စော်ကားနေတာလဲ များသွားပြီ ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုဘူး – ခွေးစကားပြောလာတဲ့ကောင်တွေကို ပါးရိုက်ပေးမဲ့ လူပဲ လိုတယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဒီကောင်တွေက မေးနေတာမဟုတ်ဘူး အမှန်တရားကို သိချင်တာ မဟုတ်ဘူး စော်ကားနေတာ – များသွားပြီ စော်ကားနေတာလဲ များသွားပြီ ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုဘူး – ခွေးစကားပြောလာတဲ့ကောင်တွေကို ပါးရိုက်ပေးမဲ့ လူပဲ လိုတယ်
ဒီကောင်တွေက မေးနေတာမဟုတ်ဘူး အမှန်တရားကို သိချင်တာ မဟုတ်ဘူး စော်ကားနေတာ – များသွားပြီ စော်ကားနေတာလဲ များသွားပြီ ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုဘူး – ခွေးစကားပြောလာတဲ့ကောင်တွေကို ပါးရိုက်ပေးမဲ့ လူပဲ လိုတယ်
June 24, 2017 drkokogyi
ဟုတ်ပါ့ဗျာ
ဒီနေရာမှာ ကိုလှမြင့်နဲ့ ကျတော် စိတ်သဘောထား ခြင်း တထပ်ထဲပဲ
အမေးနွားကျောင်းသား
အမှန်တရားကို သိချင်တာ မဟုတ်ဘူး
များသွားပြီ
စော်ကားနေတာလဲ များသွားပြီ
ဖြေနေကြတာတွေလဲ များသွားပြီ
အမှန်ကို သိချင်လို့မေးတာ မဟုတ်တဲ့အတွက်
ဘယ်လောက် အကောင်းဆုံး အဖြေကို ပေးပေး
နောက်ထပ် မေးခွန်းတွေ စောဒက တွေနဲ့
ဒီလို မေးခွန်းတွေ အများကြီးရှိခဲ့လို့
ပညာရှင်တွေက ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တာတွေ
ကျမ်းကြီး ကျမ်းငယ်တွေနဲ့ရော
စာအုပ် စာတမ်းတွေ အသံဖိုင်တွေ
သိချင် တတ်ချင် နားလယ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာဖတ် လေ့လာ သင်ယူ
ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုဘူး
ပါးရိုက်ပေးမဲ့ လူပဲ လိုတယ်
Khin Mg Aye added2new photos.
ဒီလို အစွန်း​ရောက်​​တွေနဲ့ပတ်​သက်​လာရင်​ သိတ်​ရှည်​ရှည်​​ဝေး​ဝေး ပြန်​မရှင်းပြဘို့ ကျ​နော်​ ထပ်​မံ ​မေတ္တာရပ်​ ခြင်​ပါတယ်​ ၊
သူတို့က စွပ်​ဆွဲတာ ဆို​တော့ ဆီလို အ​ပေါက်​ရှာပြီး တမျိုးမဟုတ်​တမျိုး လှည့်​ပတ်​စွပ်​ဆွဲပုတ်​ခတ်​​စော်​ကား​နေမှာဘဲ ၊ ဒါ သူ့အလုပ်​ ၊ သူ့ သာသနာ သူ ပြုတတ်​သလို ပြု ​နေတဲ့အလုပ်​​လေ ၊ သူ့ အစိုးရ အဲ့ ​ဆောရီး သူ့ အရပ်​နဲ့သူ့ဇာတ်​ ။
ဒါကို ကျ​နော်​တို့က ဟိုသမိုင်း ဒီသမိုင်း ဟိုကျမ်းကိုး ဒီကျမ်းကိုး ဟိုဖြစ်​စဉ်​ ဒီဖြစ်​စဉ်​​တွေနဲ့ လန်​ပတ်​​ကြောင်​ရာ ( အဲ့သာ ဘာ​ပြောမြန်း​တော့မသိဘူး )
အရှည်​ကြီး အရစ်​​ရှည်​ ရှင်းပြမ​နေနဲ့ ၊ ပင်​ပန်းတယ်​ ၊ ​မောမယ်​ ၊ တို ထိ ဘဲ ​ကောင်းတယ်​ ၊ ဟတ်​လား ၊
´´´´´´အမှန်​​ပြောရရင်​ ဘယ်​ အစ္စလာမ်​ ဘာသာဝင်​ မဆို ကုရ်​အာန်​ရဲ့ မိန့်​မှာချက်​ကို မိနစ်​ စက္ကန့်​ မဆိုင်း တ​သွေမတိမ်း လိုက်​နာရ​တော့ ၊ မင်း​ပြောသလို သာ သတ်​​ကြေးဆို အစ္စလာမ်​မစ်​ ၅၇ နိင်​ငံက ဘာသာခြားအားလုံး ကုန်​သွားတဲ့အပြင်​ ကုန်​ကုန်​​ပြောရရင်​ ဆွမ်းသွတ်​​ပေးမဲ့ ဘုန်းဘုန်း​တောင်​ ကျန်​မယ်​ မထင်​ဘူး ​လေ ၊
အမြင်​ကျယ်​ကျယ်​ထား ၊ ဖျင်​​ဂေါင်းကို တပ်​နိင်​သ​လောက်​ ရှူံ့ထား ၊ ​နောက်​တခါ စာများများဖတ်​ပြီးမှာ့ တက်​ခဲ့ လိုက်​´´´´´´
အို​ခေ ၊ ဒီ​လောက်​ဆို ​တော်​လိုက်​​တော့ ၊ ရပြီ 🙂 🙂
( ဝါဇီ လှမြင့်​ )
← ၉၆၉ စတေဂါကို သော့နဲ့ထိုးခွာမိတာ.ထောင် (၂)နှစ်- ဆင်းတုတော်မျက်နှာ ဆေးနဲ့မှုတ်မိတဲ့ကလေးတွေ (၂)နှစ်စီ – အခု ၀တ်ပြုကျောင်းဆောင်/စာသင်ကျောင်း/သင်္ချိုင်းတွေဖျက် လူတွေကို လိုက်ပြီး ခုတ်ကြ/ရိုက်ကြတာ ညှိနှိုင်းနေတယ်တဲ့ – မင်းတို့လူမျိုးသိပ် တရားမျှတတဲ့လူမျိုးပါလား
According to Cardinal Charles Maung Bo’s way of thinking, “Christian Ethnic Minorities are also NOT suffering from any atrocities by the Myanmar Military BUT just problem of rebellion. IS is also not doing any crime by killing Christians in US and EU as they are at war with Christians” →
တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ မွတ်စလင်ပရဟိတသမားတွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေ လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ OIC အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ကြမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်သင့်
My sisters and sisters in laws
ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် မြန်မာမွတ်စလင်တွေ ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသား တွေက တာဝန်ယူ ပါတယ်
ချစ်ကြပြီပေါ့အမျိုးဘာသာ ( နွား​မွေးမြူ​ရေး နဲ့ ကုလား​မွေးမြူ​ရေး )
drkokogyi on စစ်အာဏာရှင်လက်ထွက် တိုင်းရင်းသ…
drkokogyi on ပထမဆုံးသွေးနှော ခြင်းကိစ္စ စခဲ့…
drkokogyi on ကြံ့ vs မဘသ
drkokogyi on ဟိန္ဒူအမျိုးသား ဦးဘာဘူးလ်နဲ့ သ…
Moe Myint Kyaw on Ramdam & Eid (Hari Raya) d…
ကိုးကန့်စစ်ပွဲမှာ တပ်မ ၃၃ အလဲအကွဲ နဲ့ ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ် Myanmar Army defeated by Kokants
U Soe Htun Shein is one of the main Myanmar-Chinese cronies who is sponsoring Anti-Islam activities
သည်မြေမှာ မွေး၊ သည်ရေကို သောက်၊ သည်လူထုနဲ့အတူ လက်တွဲနေကြသူတွေကို အသားအရောင်၊ အသွင်အပြင်၊ အယူဝါဒ ကွဲတာနဲ့ပဲ ဧည့်သည်လို့ ထင်နေတဲ့အထိ အတွေးတိမ်အောင် သွန်သင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ သူ့မိဘ၊ ဆရာသမားတွေကိုပဲ အံ့သြမိပါတယ်
BC ​ခေတ်​မှာ ဓားမိုးသာသနာပြုသူ
2018 May new Deputy Prime Minister of Malaysia's Myanmar Politics Interview with 'me'
ငါးမျှားသူ = ကာချုပ် ငါး = ဒေါ်စု ငါးစာ = မြန်မာပြည်မှ မွတ်ဆလင်များ